Marka dibadda u safraya, waxaan dhamaanteen jecel nahay jaaniska aan ugu adeegi karno nafteena, qoyska iyo asxaabta! Waxa uu dareensan yahay kala duwan ee dal kale, ma waxaa? Marka ay timaado in Europe, shopping ma niyad jabin. Ma aha oo kaliya ma u leeyihiin magaalooyinka shopping caan ah sida London iyo Milan, xitaa waxay leedahay xarumo ganacsi oo badan oo bixiya qiimo dhimis weyn wadada weyn ilaa noocyada raaxada-dhamaadka sare. Hoos waxaan si faahfaahsan 5 Of The warbaahinta Shopping Best In Europe.
Maxaad aan go'aansanno in aan this dar in warbaahinta Shopping our Best in Europe? Dukaamada The yabooho dhimis ah 30 si ay u 70% marka la barbar dhigo qiimaha lagu iibiyo ee dukaamada caadiga ah iyo inta badan waxaa jira dallacaadaha more gaar ah! Haddii aad jeceshihiin magac weyn, aad halis u ah oo loo helo qaar ka mid ah heshiisyo weyn oo kaliya, qabashada dharkaas ama boorsadaas, ama kabahaas labada ah ee aad ku aragtay iyaga oo qaali ku ah dukaanka magaalada.
Baro waayo-aragnimo u gaar ah shopping oo ay goob-hawada furan at La Vallee Village dhow Paris. Waxaa jira in ka badan 110 yaalaaan moodada caalamiga ah ee caanka ah. Waxa kale oo jira noocyada nololeed bixiya ay ururinta xilli hore qiimaha dhimay, sannadka oo dhan.
Tuulada waa hoyga in kabadan 110 yaalaaan of noocyada qiimaha ay ku jiraan: Armani, Calvin Klein, Carven, Charles Tyrwhitt, CH Carolina Herrera, Tababare, Diane von Furstenberg, Fred Perry, Furla, Garo, Hackett, Jimmy Choo, Kenzo, Longchamp, Marni, Michael Kors, Moncler, Paul & Joe, Paul Smith, Poiray, Roberto Cavalli, Salvatore Ferragamo, S.T. Dupont, Sandro, Superdry, Ted Baker, Tods, Tommy Hilfiger, Kooples The, Tumi, UGG, Vanessa Bruno, Yves Salomon, Zadig & Voltaire iyo qaar aad u badan oo aanan magacyadooda wada magacaabi karno.
Liiska warbaahinta Shopping Best in Europe kama tegi karo baxay Milan! Haddii aad raadineyso dukaameysi heer sare ah, Milan badanaa waxay ku jirtaa liiska liiska dadka badan. Ma ogtahay inaad ka heli kartaa beec on shopping aad ku tilmaamay mid aad u? Booqo Serravalle Outlet Designer for dhimis on noocyada fashion wadada weyn iyo sare.
Hel oo tayo sare leh fashion naqshadeeye Yurub, alaabta guriga, ama qalabka guriga loogu talagalay 30% si ay u 60% yar. Maalmihii samaynta gubanaya dheeraadka ah iyo xiliga la soo hara waxaa dheer tagtay. dukaamada outlet Factory ayaa hadda si caadi ah ka mamnuuceen id ah picturesque magaalooyin yar yar ama dhexdhexaad ah. Sidoo kale ku dhawaad magaalooyinka iyo, Waayo, kulligood aad u ogaato, albaabka xiga waxaa laga yaabaa in xaq u! Riwaayado iyo boorso cusub qof kasta?
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “5 Of The warbaahinta Shopping Best In Europe” gal your site? sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-shopping-outlets-europe%2F%3Flang%3Dso- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)